शास्त्र अनुसार सपनामा यस्ता जनवारहरू देख्नुभयो भने तपाईको भाग्यको ढोका खुल्यो – Sandesh Press
शास्त्र अनुसार सपनामा यस्ता जनवारहरू देख्नुभयो भने तपाईको भाग्यको ढोका खुल्यो
December 20, 2020 204
शास्त्रमा सपनाका अर्थबारे चर्चा गरिएको छ । कुन सपना देखे कस्तो हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरिएको छ ।यदि तपाइँले सपनामा विभिन्न चरा वा जनावरहरु देख्नु भो भने त्यसको अर्थ के होला ? यहाँ सपनामा चरा देख्दा हुने अर्थको चर्चा गरिएको छ।सपनामा हात्ति देख्नु भो भने यो निक्कै राम्रो मानिन्छ । हात्तिमा लक्ष्मी सवार हुने हुँदा हात्ति सपनामा देख्नु शुभ भएको ज्योतिष शास्त्रको भनाइ छ ।
सपनामा भै‌सी देख्नु भो भने मिश्रित फल मिल्छ । यो निक्कै अ’शुभ पनि होइन तर शुभ पनि होइन । सपनामा घोडा देख्नु भो भने यसको सुख सम्पति हात लाग्न संकेत गर्छ । गि’द्ध सपनामा देख्नु भो भने तपाइँलाई स’म’स्या पर्न सक्छ । शो’ख वा नकारात्मक समाचार सुन्ने समयमा यस्ता सपना देखिन्छन् ।मयुर देख्नु भो भने पनि तपाइँलाई शुभ फल मिल्छ । मयुरमा शनि सवार भएको देख्नु अझै राम्रो मानिन्छ ।त्यस्तै सपनामा कौवा देख्नु भो भने यसले तपाइँलाई सुख शान्ति हरण हुने संकेत दिन्छ । ज्योतिष शास्त्रमा सपनामा कौवा देख्दा परिवारमा वा’दवि’वा’द हुने र अपमान आइलाग्ने उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस:- साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छाका चार युवाले सामूहिकरूपमा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती शुरु गरेका छन् । स्थानीय पर्वत राई, सन्तराज राई, निशन राई र चन्द्रकला राईले पारुहाङ ड्रागन फार्म आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर व्यावसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती शुरु गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले गत वर्ष रु ५३ लाख र स्वीस सरकारअन्तर्गत हेल्भेटासले रु ४५ लाख २८ हजार गरी जम्मा रु ९८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै वडालाई एक÷एक वटा कृषि व्यवसायको स्रोत केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष क्रमशः कृषिमा बजेट बढाउँदै लगिने गाउँपालिका प्रमुख खड्काले बताउनुभएको छ ।परम्परागत कृषि पेशा अपनाउँदै आएका कृषक गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएपछि कृषि पेशाप्रति आकर्षित बनेका छन् । गाउँपालिको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिका प्रमुख र वडाका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कृषि विकास समिति गठन गरिएको छ ।
Prevहृदयघातका लक्षण तपाइले थाह पाउनै पर्छ,हृदयघात हुनु अघि देखिने ८ लक्षण यस्ता छन् !
Nextशास्त्र अनुसार सपनामा यस्ता जनवारहरू देख्नुभयो भने तपाईको भाग्यको ढोका खुल्यो
छिट्टै विवाह गर्न लागेका विनयजंगलाई अचानक के भयो, रातारात उपचारका लागि लगियो